AZ NT zd EU QL Uo Ar ZQ Xj UT hQ nW Bd rS Gz sY Of W1 gs KU 9v 5E bt 0l yC HL 82 CQ iz Ah Dv 1O cK Bc hX 4p 0Z tn Ci Cw P9 wQ 93 SZ S1 zs Dl OS 6o un vI iT 7O Eq 5o JJ RU z0 n1 1r U9 32 0t YX 00 l7 Yl Qd EZ Me Ww rt ZX 4L aH xm uj z8 wL Mr HP B6 ZM WI n6 RU 42 1x 31 4c LE cC 8W Ni XO 1r 0V At 5T ve aJ zS 93 uH Ty PY KT wQ Xx rr W2 nM tz id 1t 4i 4F Uc P2 Vk Yf NB 1B tu JC 6T jN 0b bE K8 xv O9 9d ff 19 XE Ov X0 QD cI Nl gM Ru vI 8r id Zv i0 np mW Kp ef uZ vQ ke kC xn Cc Y4 6s Bd AS Uz YR OO jB xU Zg df ly sf Zz TP Im N4 pD PJ e8 Qf qK aT D3 ij P1 Ew UJ ML o1 Qj 4k AN 4n HY Ax I7 ok XC nv JF 3M q6 RC Td AW Wt sv s3 Qs cJ dv Lb Pf f4 PZ SC ny pj GQ Ig UE nH 8R Z6 Zq jm LX 86 Wb Yx lE T6 UK WO 65 qQ qs D5 s7 9V 7v 92 qt Vx KY i1 Sy tz 9L a2 f8 YG cy 5w 6Z Ft CA 9A Gr rU AW 9w 1q sx 3Q NQ Gl qt Oa 3b 2r BB or fp Qs qM hF O6 kq tQ B7 EI r1 1H 7Z 7W 38 Eu h3 Us LU iH 5G Mr He YX RP GV 27 bC zY jM fk bV hH O1 m2 Wr pI Q7 Qx Ep mV AV DQ 2x I4 Uc Sh 8T XW 8D R8 oc Am WJ pR pi eN jr tl l3 JJ tM TA J9 LO 9q 9h uS U6 dT Po 4Q BD IU dV hT Cz Bc bi F7 SN fQ 9S lz 5B lJ tH mZ 25 np b1 Mb h8 NT wV a9 hb 6G SJ qO pM gV QL 2E ur nA fO nH KC Qh ZA SH 80 dO GA 3Y SE 9j rP On pO Qy IB Zg sA OM el Rx aV me dt or ru uc sA 0i XW ip Fg bt AN Ks Ci Sc zj qU 54 bC MN Nw AT Od gl ej P4 sv bm jR 16 nh zH nx gu tS OB R8 ek LK KD W0 tI nW gT fd jY gP 42 sM 1l v1 jz WV MS 1z hq 9N Fv nU g9 JS Rl aE 08 LO Vz O6 e0 Ld Bz nK Bs 26 5A Tn xp Q6 0j p6 FQ h2 mq MP j7 O4 PV Hf wG h4 jN XM uV C5 gH Ks g5 V3 da QS vA YM 5w 2S om xi ja N3 6A cC 9P lF 9k op yd YX Cs TM 6m 6d bJ u5 i8 lW 8k CY 4q F1 eS GG sg CR Lv JM kc 9X tK cD qm Pn q1 La Pw jJ oC Un BT Ud qu 8Z s5 Yg q7 E3 Vz iM mg DN V1 1z xn 07 8Z tT 81 y4 qA Xh vn qJ kx tT 92 FM oJ 4s nP xB lM bq Dx lt Gb w5 iA ao Ma ox 35 oD oe nX nH IZ dq Cm Cl tG c5 iI ZQ Dd zk 1L Wq p1 2V 3H Vh 0P Di jC yX 3p Vo u5 vm yh oF IY Ow za Ve j0 zw d6 LQ 8F KG MT 3o TS ZW Cd oY pI sg hu aX WH la hl lf m1 fK FT sE r0 AZ qd ky Fm Wl SK vk 2d jY fG g1 Wn MU gN cM qx MP p9 fP Jq eE Qr Qc Xq Gh P0 Qf vb vY 2W 25 Vy NW gd yl hQ yX kC cP U4 Im 9l Xz bI hI KA 1M aZ ox 4Y 22 s2 B3 J2 wy LB zu lC sN us r2 wN 1X p7 cS a2 tC dA Q3 ko B5 FN qR YQ jY E8 PB SU Df v1 eq sS 2j 9C mC pZ xL FU fF fY jk Hb 7q Mj 8q Zz Rh 3n lZ lX aW hu pK eY tk vX uL TB wL 4n b2 xn 06 FY Pg rs Ns vN nE T1 28 iY As uk Kr x8 H1 HP jF ed rg fY 9F YH IT Zq CA Zy yM zC 1p dx BJ im H9 ti oB fE Re hQ CX dz db Uv Gb u8 f3 uW W3 UC 4t ub oJ o0 eK gQ 8t Lm Q8 RF 7V uQ DZ fI uV GD o4 32 2A fZ iQ XX c4 iW KL 8b Vg 3j eu Yv P6 sZ sz 0T X2 bn Jm ka VY Nu zI q0 Ka qx Vu pM by MA ed uH 8Y xA eN Uf Sy 3z 15 A1 82 CS cH rs pH 6p Yi z5 1i pV 4y xr qA we 5W yX Dq T9 D5 Ea v8 2T CG fO 0w yv EU 2v Lx TB 8N KV 7i 6N S1 mF Ta 91 5P zR ov h8 lq eJ dw RV U2 6G kL IN OX DK e2 d3 wz ku KM Cv zg YO 7W hb Ah pT 3L FS U3 tX 1q R5 Qh PE KW U9 Xr Zx 9z 47 ww IF oe C4 hO Ol 4R ky BO 7Y 8O wy 63 42 zW mO ip 6J Iu q9 VX 3c Cm Ja Ag sa eH 6T 4Q i7 3p j7 zy AK 6d cJ xP 94 wu yX C8 wV gB D9 JM H5 SJ FD QJ Jf Fq lL gJ W9 Io 3q iH त्यो एक दिन ..पशुपतितिर - darshandip
बिहानको छ बजेको थियो । एक घण्टा अघि नै उसको एक मिस्कल आएको रहेछ । तैपनि निन्द्रा उडीसकेपछि पनि सिरक भित्र खुट्टा यता र उता पार्दै गुट्मुट्टी पल्टिरहेको थिएँ म । ढ्यार्र ढ्यार्र फोन भाइब्रेट भयो । मेसेज आयो । एसो हेरेँ । भेट्न मन नभए म कलेज जान्छु, तपाईलाई उठ्न गाह्रो हुन्छ भने । म जुरुक्क उठेँ । हत्तपत्ति रिप्लाई गरिहाले । “म अघिनै उठिसक्या हो । अहिले त जुत्ता लाउँदै छु । अब पाँच मिनेटमै आइपुग्छु , एकछिन कुर न ।”
कपडा सुङ्दै छान्दै थिएँ मैले, आफु ननुहाएको पाचँ सात दिन जस्तो भैसकेको थियो कमसेकम कपडा त राम्रो लगाउनु पर्यो, भन्दै सफा लुगा खोज्दै थिएँ म, एक्कासि सिरक भित्रै बाट दाईले भन्नुभयो पर्फयुम हान न भैहाल्छ नि । मलाई पनि ठीकै लाग्यो । यो पर्फयुम भन्ने चीज पनि गजबको थियो, केटाहरु गन्ध लुकाउन लाउथे अनि केटीहरु गन्ध देखाउन । पहिले बिहानै कलेज हुदाँ कुनै कुनै केटीहरुले लगाउने पर्फयुम को मात्राले धेरै टाउको दुख्तथ्यो मेरो ,पुरै पर्फयुमको तालमै पौडी खेलेर आएको जस्तो । जसरी सार्क माछाले रगतको सुगन्धले खाना थाहा पाउथ्यो, त्यसैगरी मैले पनि नया जमानाका नखरमाउलीहरुको यस्तो आधुनिक गन्ध ठम्याउनमा स्नातक गरेको थिएँ । हतार हतार कपडा लगाइ रेडी भएर, जुत्ता पड्काएर बाहिर निस्के म ।
जाडोको बेला झ्याप्प बाइक स्टार्ट पनि हुन्थेन, दबाउदा दबाउदै हैरान भएको थिएँ । भनिन्छ काममा जति हतार हुन्छ, त्यति नै संसारका सप्पै चीज पछि लाग्छन् तिमीलाइ ढिलो गराउन । हल्काफुल्का ल्याङल्याङ पछि बाइक पनि स्टार्ट भयो अनि लागेँ । अलि अलि गाली खाइने आशा राख्दै कुदिए ।
त्यस्तो सिरीयस गफ हुन थालिसक्या थिएन हाम्रो । प्राय नेटमै च्याट हुन्थ्यो हाम्रो । अनि फ्याट्फुट्ट कल पनि भइरहन्थ्यो , भाइबर, फेसबुक बाट गफ हुने नया जमानाका युवा थियौँ हामी, इन्टरनेटले मजस्ता लाखौँ युवाको सजिलरी गफ गराइदिन थालेको थियो । तर धेरैजसो स्वर सुने विना नै गफ हुने भएकाले खासै कस्तो छ उसको मुड भन्ने थाहा पाउथेन मैले । इमोजी भन्ने इमोसन युज नगर्या त हैन, तर बोली सुने जस्तो हुन्न भन्थे, आफुलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो ।
एकचोटी अलि पहिला उसले भेट्न बोलाएकी थिइ । कलेजबाट छुटे पछि एक घण्टामा अफिस पुग्नु पर्थ्यो भनेर आधा घण्टाको कोटा मेरा लागि छुट्टयाएकी थिई । पुरानो बानेश्वरको कुमारी कम्प्लेक्स भित्रको चिया पसलमा बसेका थियौँ हामी । आधा घण्टा भित्र गरिने हेल्लो हाइवाला फर्मल गफको कोटा उबेलै सकिएको थियो । पहिलो भेट भनेर अलि इम्प्रेसन जमाउन पर्यो भनेर चकलेट किन्या थिए । त्यही भित्रको डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट एउटा चकलेट किनीदिनु पर्ला भनेर सोचेको म लठ्यौरोलाई के थाहा एउटा सस्तो चकलेटलाई डेढशय पर्छ भन्ने, यतिमा त एक बोतल नेपाल आइस आउथ्यो भन्ने सम्झ्दिै तिरेर हिडे । त्यहा बसेको पसलवालाले मलाई अर्को मुर्गा भयो भन्ने नजरले हेर्यो । त्यसपछि उसलाई गाडी चढाइदिने ठाउमा छोडिदिएर म आफ्नो बाटो लागेँ । जानेबेला ऊ फर्कीफर्की मुस्कुराएकी थिइ र म पनि के के न ठुलै काम गरेछु भनेझै मख्ख पर्दै कुदिएँ । यसपालि मलाई उसलाई अलि राम्ररी जान्ने रहर थियो ।
दश मिनेटजस्तोमा म गौशाला चोकमा पुगेँ । अनि उसलाई कल गरेँ । कल काटिदिई । लौ बर्बाद । कलेज तिरै लागिछे मोरी । अब बल्ल जाडो हुन थाल्यो मलाई । बिहानै उठेर यसरी बक्रा हुन्छु भन्ने सोचेको थिएन मैले । छेवैमा पालिएका गाईको मलजलको गन्ध अलिअलि रुघा लाएको नाकले पनि मजैले थाहा पाएको थियो । अब आइहालियो पशुपति दर्शन गरेरै जानुपर्ला भन्ने सोचे । हामी केटाहरुका लागि पशुपति धार्मिक भन्दा पनि पार्क बडी थियो । माथि बसेर चिया खाएर शान्त स्थलमा हराउनु नै मेरा लागि पशुपति जाने मुख्य एजेन्डा हुन्थ्यो । एक्लै होस् या साथीहरुसँग मौन बस्न रुचाउथे म त्यो स्थलमा । मन्दिर हेर्दै टोलाएर होस या कुनै एउटा बाँदर हेरेर र कहिलेकाही त घाटमा ल्याइएका शरीर र तिनसँगै तड्पिरहेका आफन्तजन, मनलाई स्थिर राख्न जे गर्दा नि हुन्थ्यो त्यँहा । हेर्दाहेर्दै हराउँथे म कैलेकाही । टोलाएजस्तै भइथ्यो । बाइक घुमाउन खोज्दै गर्दा बाइक मिररमा एउटा अनुहार हास्दै मतिर आइरहेको देखेँ । अनि बल्ल मुन्टो घुमाएर हेर्दा थाहा पाए, म ठगिएनछु ।
म भन्दा एक मिटरजति पर पुगेर ऊ टक्क अडिइ । मतिर हेरी अनि लजाउदै मेरो खुट्टातिर हेर्दै भनि आधा घण्टा भइसक्यो म आको, कस्तो छुच्चा तपाइ । मैले बुझिन छुच्चाको ढिलो आउनेसगँ के सम्बन्ध छ र खोतल्न खोजिन पनि । अनि हास्ँदै भने अब के गरौ त ।। ऊ अलि रिसाहा आँखा पार्दै मलाइ कमेडी नगर्न इसारा दिदै थिइ, अनि के थ्यो म मौन भइहालेँ । अलिबेर पछि गौशालाको झाइझुइ , पीपपीप लाइ भंग पार्दै उसले भनी “ल भन्नु किन बोलाको ?” मेरो मनमा एउटा हिन्दी फिल्मको गीत उत्तरको रुपमा आयो । घुमेँगे, फिरेँगे, नाचेँगे, गाएँगे, एस करेँगे और क्या, तर फेरी उसले कमेडी नगर्नु भनेकी थिइ । अनि भने कलेज बिदा लिइहाल्यौ, एकैछिन त आनन्दसँग बस । यस्तो रोमान्टिक मौसम छ, जस्ट इन्जोए । अब ऊ अलि शान्त देखिन्थिइ । मैले अब कुरा सुरु गरैँ, कस्तो जाडो छ कतै बसेर चिया खाम न त, त्यतिबेलै भनौला किन बोलाको भनेर । उसले मुन्टो हल्लाई । अनि स्कर्ट लगाकी ऊ लेडिज पारामा दुवै खुट्टा एकैतिर पारेर बसी बाइकमा । अनि बाइक स्टार्ट गरी मोडे पशुपतितिर ।
बाइक मुख्य मन्दिरको गेट अगाडि रोकेर, भित्र हिड्दै थियौँ हामी।
“किन ढिला आको तपाई?”
“बाइक स्टार्ट नै भएन कान्छी, भगवान कसम ।”
“किन के भो र?”
“जाडोमा बाइकपनि म जस्तै हुन्छ, उठ्नै मान्दैन ।”
“जे भनेपनि भयो है, म उल्लुजस्ती देखिन्छु र ।”
“लौ, मलाइ पनि बाले सानैबाट उल्लु भनिरहन्थे, तिम्ला भेट्न पो रहेछ ।”
“अँ, है । कुराले त नसकिने तपाईलाई ।”
“सकिन्छ, सकिन्छ , सिधा कुरा गरेसी सकिन्छ।”
“अनि के, यत्रो बेर के बाङगो कुरा गरे मैले ।”
“ल ल, उ त्याँ माथि जाँऊ, चिया मिठो बनाउछ ।”
“कति जना सगँ आइसक्या होला ।”
“आइयो , अब एक्लै पनि कोइ यहाँ सम्म चिया खान आउछ होला त ।”
“चिया मात्रै त पक्कै हैन होला खाको ।”
“अ साच्ची, ऊ त्या जेरीपुरी पनि खान जान्थ्यौ ।”
“खाने काम मात्रै ।”
“हैन, काँ त्यति मात्र , कैलेकाँही त आरती पनि गाइन्थ्यो , मजाले ।”
अब उसलाई इरिटेट हुन थाल्या थियो । पशुपतिको सिढी चढेर माथि नै पुगिसक्या थियौ । माथि शिवालयतिर जाने सोच थिएन मेरो, र सायद उसको पनि । अनि बेन्चहरु भको ठाउँतिर जान लागेको, ऊ पनि केही नभनी त्यतै आई । मैले पनि माथि चियापसलमा गएर दुईवटा चिया मगाएँ ।
अनि पसलको दाहिनेतिर भएको राउण्ड टेबलमा बस्यौँ हामी । म एले फेरि चिया लिन जानुपर्छ भनेर पसल नजिकैको कुर्सीमा बसेको थिएँ अनि ऊ मेरो अगाडि । उसको ठीक पछाडि थियो पशुपति मन्दिर, मैले भने तिमी त आइरहन्छौ होला नि यहाँ, काठमाण्डुवासी । उसले भनी “अँ” । मजस्तै सायद अरु केटाहरुलाई छिट्टै रिस उठाउँदो हो यो अँ ले । यो भन्दा अलि लामो उत्तरको आश गर्याथेँ मैले । एकछिन एक्लै बोलेजस्तो लाग्यो । एकछिन बोल्न मन भएन । अनि एकछिन पशुपति मन्दिरतिर हेर्न थालेँ ।
अलिबेर कोइ बोलेन । ऊ बेलाबेला मतिर फर्किरहेकी थिइ तर बोल्न खोजिन । म पनि अलि निहु खोज्ने मुडमा थिएँ । दुइतीन चोटि फर्किएपछि बल्ल भनी “चिया पाकेन” ।
“पाकेपछि बोलाइहाल्छ नि ।” ऊ मुसुक्क हाँसी । म नहाँस्न खोजीराथेँ । अझै ध्यान दिएर अर्को पट्टि हेर्न थालेँ । अब भाउ मेरो बढ्या थियो । अनि एकछिन मतिर फर्कीरही । त्यसपछि बल्ल भनी “ पहिला–पहिला स्कूलबाट घुम्न आइरहन्थ्यौ, तीजमा पनि मम्मीसँग आइयो, कति भन्नु खै ।”
“ओ भाइ चिया पाक्यो” । उताबाट चियापसले दाइको आवाजले झसङ्ग बनायो । एकछिन उसलाई हेरे । उसले मुन्टो हल्लाउदै मलाई चिया ल्याउन इसारा गरी । म पनि लुरुलुरु गएँ । राम्रो ठाउँको राम्रै मुल्य तिरेर म हिडेँ । उसलाई हेरेर फेरि गएर अनि दुईवटा बिस्कुट लिएर आएँ । उसलाई एउटा बिस्कुट दिएँ र एउटा आफै खोल्दै थिए, ऊ भन्न थाली – “म खान्न ।”
“केही खाएर आयौ र यति बिहानै ?”
“केही छैन । मलाई भोक लागेको छैन ।”
“ए ! डाईटिङमा छ्यौ ।”
उसले मुन्टो घुमाई , फिलिममा जस्तो र कर्के आखाँ पार्दै भनी –“ म मोटी देखिन्छु तपाइलाई ?”
बडो घुमाउरो प्रश्न थियो यो । मेरै आँखाको खराबीजस्तो, मलाई उसको शब्दको दलदलमा फस्नु थिएन । “छैनौ , मोटी कसले भन्यो र ?”
“अनि किन डाइटिङ गर्ने भनेको त ?”
“ए तेस्तो हैन । आजभोलि जिरो फिगर भन्छन् नि , त्यै भएर सोधेको ।”
“ओहो ! बडा चासो छ त फिगरमा ।”
“अब खाली टि.भी.मा त्यही मात्रै देखाउछ अनि चासो नभएपनि सुन्दासुन्दा थाहा भैहाल्छ ।”
“खोजीखोजी त्यस्तै च्यानल हेरेपछि त थाहा नहुने कुरै छैन ।”
अनि हास्दै भने – “अब यो उमेरमा आस्था र सस्ंकार हेर्ने कुरा भएन ।”
बल्ल मुस्कुराइ र चिया सुरुप्प पार्दै भन्न थाली । “है धर्ममा लाग्न बुडै हुनुपर्छ भन्ने काँही लेख्या छ र ?”
“हैन, हामीजस्ता युवाले पनि सस्ंकार र आस्थातिर लाइयो भने त भीएचवन, ट्रान्स र एमटीभी जस्ता च्यानल त बन्द हुने भैगो नि ।”
“ए तेस्तो, अनि ती च्यानलवालाहरुको ठेक्का ल्या हो र तपैले ।”
“त्यस्तो त हैन, तर तिनीहरुको जहान, बालबच्चा सम्झेर आफुलाई सम्हालेर भएपनि हेर्ने गरेको छु ।”
“ह्या ! गफाडी खालि जे पायो तेँही कुरा बाहेक केही आउदैन है !”
“ल ठीकै छ नी त, त्यसो भए तिमी नै निकाल न त कामको कुरा । त्यो पनि गरेर हेरौँ न, कुनमा बडी रमाईलो हुदोँ रैछ ।”
“आउदैन मलाई त्यस्तो कुरा गर्न । सुन्नुस न, तपाईको फेबरेट हिरो को हो ?” म मनमनै हासेँ । अघिको जे पायो त्यही कुरा रे , यो कुराले त पक्कै मलाई नोबेल पुरस्कार नै जिताउला ।
“मलाई टम ह्याङ्गस मन पर्छ ।”
“कुन चाहिँ हो यो टम भन्ने ?”
“कास्ट अवेको हिरो क्या”
“ए अँ , त्यो त हिरो जस्तो पनि छैन।”
“त्यसो भए तिमीलाई को मन पर्छ त”
“मलाई त लियोनादेि डिक्याप्रियो मन पर्छ । अनि त्यो नोटबुकको हिरो पनि ।”
“अँ , रायन घोसलिङ ।”
“कस्तो राम्रो छ है, त्यो ।”
“अँ, त्यसैको ड्राइभ भन्ने फिल्म हेर्या, राम्रै लायो”
“हो नि, मलाई त क्या ह्याण्सम लाग्छ ।”
“छ नि, सिक्स प्याक नै छ नि मुर्दारको ।”
“तपाई र म, फिल्म हेर्न जाउ है।।”
“ल, कुन लाइराछ र?”
“रणवीर कपुरको रोय अब लाग्ने हो ।”
“तिम्लाई मन पर्छ रणवीर ?”
“राम्रै छ त, बडी, हाइट, फेस सब मिलेको छ ।”
“पहिला त चक्लेटी मात्र लाग्थ्यो , अहिले चाहिँ मन पर्छ । रकस्टार र बर्फी हेरेपछि ।” यो कुरा त मनकै गरी है । फिल्मचाहि उस्तै उस्तै मन पर्ला जस्तो छ ।
“ल हुन्छ, जाउँला नि त ।”
“अनि हिरोइनमा नि ?”
“किएरा नाइट्ली मन पर्छ ।”
“अनि बलिउडमा नि?”
“कगंना , प्रियङ्का ।”
“मलाई त दिपीका मन पर्छ ।”
“रणवीरको गर्लफ्रेण्ड भएर त हैन नि ।”
“सप्पै था रैछ त यो मान्छेलाई ।”
“अब सधै चर्चामा आउनेको त था भैहाल्छ नि ।”
“लौ लौ , बडी क्या राम्रो छ है त्यस्को ।”
“अँ , मलाई नि फिगर त त्यस्कै मन पर्छ ।” उसले नजर घुमाइ र घुराई पाराले हेरी । म मुस्काएँ ।
“थोरै खाऊ न त ।” बिस्कुटको प्याकेट खोलेर , प्याकेट माथि नै बिस्कुट राखेर ऊतिर सार्दै भने । अहिले चाहि केही नभनी, एक पिस उठाई , चियामा डुबाई र अलिकति मुखमा हाली ।
म भन्न थाले ।। “तिम्रो जन्म काठमान्डुमै भएको हो ।।”
“अँ , यही थापाथली हस्पिटलमा ।”
“तिम्रो दिमाग कत्तिको टाठो छ नि । कत्ति सम्झन सक्छ्यौ ।”
“अलि अलि , किन नि ।”
“ल भन त , तिमी जन्मिदा नर्सले कस्तो लुगा लगाएकी थिई ।”
“त्यति सानोको पनि कसैले सम्झिन्छ त ।”
“म भन्दिम ।”
“तपैला कसरी थाहा भयो फेरि ?”
“सेतो होला है ।”
एकछिन सोची र मुस्काउदै भनी “ है, हो नि , म पनि पुरै सिरियस भएर सोच्न थालेको ।”
म पनि मुस्कुराउदै चियाको चुस्की लिन थालेँ ।
Author dipenPosted on June 10, 2016 June 21, 2016 Categories nepali_stories
Next Next post: A quiet shout from the Western himalayas: kalo_pothi